Laftagareen oo ku dhawaaqay hadal ku socda Siyaasiyiinta ka walaacsan doorashada - Awdinle Online
Laftagareen oo ku dhawaaqay hadal ku socda Siyaasiyiinta ka walaacsan doorashada
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa ka hadlay walaaca ay siyaasiyiinta ay kamid yihiin musharixiinta Madaxweynaha Soomalaiya ka qabaan howlaah doorashada Soomaaliya.
Waxaa uu ahdalkiisa intaasi ku daray inay muhiim tahay in mas’uuliyad la iska saaro xalinta cabashada ka imaaneysa siyaasiyiinta ee la xiriirta doorashada six al buuxa loo gaaro.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in doorashada halka ay ka bilaabaneyso in wax lag xaliyo ay tahay mid wanaagsan oo horseedi karta doorasho ku dhacdo mid hufan oo xor iyo xalaal ah.
Hadalka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli muran la xiriira doorashooyinka uu taagan yahay, kadib markii Musharixiinta qaar ee madaxweynaha ay kasoo horjeesteen Guddiyada doorashooyinka oo ay sheegeen inay ku jiran Xubno ka tirsan NISA & Shaqaalaha Dowladda.
Previous articleCiidamada Mareykanka oo bilaabay ka bixitaanka Soomaaliya
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Booliska Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Sanad-guuradii 77aad